Hiran State - News: Wadamada Carabta oo Somaliland ku amaanay nabadgalyada ay shacabkeedu heystaan
Wadamada Carabta oo Somaliland ku amaanay nabadgalyada ay shacabkeedu heystaan
Kuwait:-Dalka Kuwait oo ka mid ah wadamada Carabta ayaa waxaa maalmahani ku sugnaa madaxweynaha Somaliland Ahmed Siilaanyo iyo wafti uu hogaaminayey isagoo dhawaantan ka soo duulay dalka isu taga imaaraadka Carabta.
Waftiga Siilaanyo ayaa si aan caadi aheyn loogu soo dhaweeyey halakaasi isagoo masuuliyiintii uu dalka Kuwait kula kulmay rajo weyn ka muuujiyey. Siilaanyo oo ah rug cadaa siyaasadeed mudane ku soo jiray siyaasada Somaliya iyo mida Somaliland ayaa tan iyo markii uu doorasho xor ah kula wareegay masuuliyada uu hayo waxuu awoodiisa iskugu geeyey arimaha dibada oo ay aad ugu liiteen xukumadii isaga ka horeysay.
Hotelkii uu ka deganaa dalka Kuwait ayaa diyaarad qaas ah looga qaaday xili uu kula kulmayey mid ka mid aha masuuliyiinta dalkaasi Kuwait. wadamadii uu tagay Siilaayo ee carbeed ayaa aad ula dhacay fikir cusub oo uu la shir tagay kaasi oo ah in inta laga gaarayoSomaliweyn ay wadamada Carabtu maalgashi ku sameystaan Somaliland, taasi oo hada u muuqata in waxoogaa guul ah laga gaadhay.
Hadaba bal milicso madaxweynaha Somaliland oo diyaarad looga qaadayo Hotelkiisa, dabcan Siilaanyo iyo xukumada Farmaajo ma ahan kuwo leys bar bar dhigi karo dalka Kuwaitna waxuu ka mid yahay wadamada ay dowladnimu qiimo ugu fadhiso. hadaba bal eeg faraqa u dhaxeeya xukumada Farmaajo iyo Siilaanyo.
Madaxweyne Siilaanyo iyo qaabka uu ku yimid.
Waxaa doortay dadkiisa Caasimada Somalilandna meeshii uu doono ayaa ka tagi karaa. Shacabkiisu nabad leysku haleyn karo ayey heystaan taasi oo u saamaxeysa inuu wadanka si nabad ah uga safro uguna soo laabto. waxaa ilaaliya ciidamo Soamliyeed oo ka soo jeeda Soamliland.
Xukumada Farmaajo iyo qaabka ay ku timid.
Waxaa soo magacaabay madaxweynaha Somaliya. caasimada Somaliya waxuu ka joogaa 4 KM.waxaa waardiye ka haya ciidamo African ah waxa laga waardiyeynayo waa shacabka Somaliyeed oo ay kasban waayeen. waxuu ka soo horjeedaa in wadanka ay ka dhacdo doorasho si looga baxo ku meel gaarka. diyaarada uu dalka kaka baxo iyo mida uu ku soo laabanayo waxaa iska leh amaba u kireeya qaramada midoobay, sidaasi ay tahay nabadgalyada yar ee Somaliland iyo shacabkeedu heystaan kuma faraxsana Farmaajo iyo xukumadiisa waxeyna maalin iyo habeen ku hayaan Somaliland ma go,i karto iyo wax la mid ah halkii ay ku booqan lahaayeen degaanadooda oo ay waxkasta oo ay shacabkaasi ku qancin karaan kula macaamilaan xitaa hadii ay doonayaan madaxweynaha Somaliya in lasiiyo.
Dowlad fedral ahey xaal qaado weldone Somaliland and Puntaland sida ay shacbakooda u gaarsiiyeen nidaam iyo kala danbeyn.
· admin on April 30 2011 13:22:31 · 0 Comments · 2536 Reads ·
14,614,610 unique visits